ओलीमा दक्षिणपन्थी भड्काव देखियो, एमाले बचाउने ब्रह्मास्त्र छ ! | Ratopati
personफणिन्द्र नेपाल/अन्वेषण अधिकारी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख ११, २०७८ chat_bubble_outline0
फणिन्द्र नेपाल/अन्वेषण अधिकारी
अहिले ओलीको पक्षमा लागेका एमालेका युवाहरुको भविष्य अन्धकार रहेको बताउँदै खनालले भने, 'केपी ओलीले जतिसुकै गरे पनि उहाँको समूहलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न । उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका धेरै युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा हाल्दै हुनुहुन्छ । एकीकृत भएको पार्टी फुटाउनुभयो । एमाले पनि उहाँका क्रियाकलापले विभाजन र विघटनतर्फ जाँदैछ ।’
दोस्रो कुरा,त्यो क्याबिनेट निर्माणपछि हामीले योजना आयोग बनाएको देख्यौँ । नेपाली समाज त जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अब समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको नयाँ युुगमा यो प्लानिङ कमिसन आएको थियो नि । यो नयाँ युगमा कसरी नयाँ योजना बनाउने,देशलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने,नयाँ आर्थिक र सामाजिक ढाँचा कसरी बनाउने ?कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने ?पुँजीवादी शोषणबाट यो समाजलाई फेरि कसरी मुक्त गर्ने ?हामीले त हिजो सामन्तवादको शोषणलाई मात्र अन्त्य गरेका छौँ । पुँजीवादको शोषण त बाँकी नै छ । त्यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रित गर्दै अन्त्य गर्दै जाने र क्रमशः समाजवादलाई कसरी विकसित गर्दै जाने । समाजवादका आधारहरू कसरी तयार गर्दै लाने,यो आवश्यकता देशका सामुु थियो । तर यो वस्तुगत आवश्यकतालाई उहाँले विल्कुलै नजरअन्दाज गर्नुभयो । हामीले यो आवश्यकतालाई उठाउने कोसिस ग-यौँ । तर उहाँले आफ्नो गुटका मान्छे मात्रै राखेर एकलौटी योजना आयोग बनाउनुभयो । यसमा पार्टीसँग कुनै सल्लाह,विचार विमर्श छैन । पार्टीको कुनै निकायबाट निर्णय छैन । कमसे कम सुझाव त हुन्छ नि,त्यो पनि छैन । ४० वर्षभन्दा धेरै पार गरेर आएका नेकपा एमालेसँग आबद्ध धेरै डाक्टर छन्,विभिन्न पेसा व्यवसायमा जाने विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू छन् । उनीहरू सबै हेरेको हे-यैँ भए । यसरी उहाँले योजना आयोग बनाउँदा पनि एकलौटीकरण गर्नुुभयो ।
पाँचौँ कुरा,हाम्रो पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग समेत मिलेर निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी ग¥यो । त्यो संयुक्त घोषणापत्रमा हामीले दर्जनौँ–दर्जन प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छौँ । सिङ्गो हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा हामी कसरी रूपान्तरण गर्छौँ,अर्थतन्त्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्छौं,हामी कृषिलाई के गर्छौं ?उद्योगलाई के गर्छौं ?अन्य विविध क्षेत्रमा हामी के गर्छौं ?त्यसबारेमा हाम्रा नीतिका शृङ्खलाहरू अघि सारेका छौँ । त्यो हामी सबैले मिहिनेत गरेरै बनाएको हो । तर,त्यो घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू एउटा पनि लागू भएनन् । उहाँले ती कुरा ध्यानमै राख्नुभएन । यसलाई मैले मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ,हिजो आम जनताले हामीलाई त्यो घोषणापत्रका आधारमा भोट हालेका हुन् भन्ने सबै बिर्सनुभयो । उहाँले मलाई भोट आएको भन्ने ठान्नुभयो । सिङ्गो आएको भोट केपी ओलीको लोकप्रियताले आएको भन्ने उहाँलाई लाग्यो । त्यो दक्षिणपन्थी चिन्तनले उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुु-याइदियो र उहाँका वरिपरि भएका मान्छेले पनि त्यसै कुरालाई ठीक हो,ठीक हो भनेर ताली पिट्ने काम गरे ।
तपार्इंले यी कुरालाई नै अझै गहिराइमा बुुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो दक्षिणपन्थी अवसरवादका मूल–मूल अभिव्यक्ति के हुन् ?म त्यसमा गइरहेको छु । कुनै पनि पार्टी सत्तामा पुुगिसकेपछि उसले आफ्ना नीतिहरूलाई त राज्यको नीति बनाएर लागू गर्नुप-यो नि । त्यसकारण ती नीतिहरू कसरी आए,केपी ओली नेतृत्वमा के नीति आयो ?त्यसपछि,५ सयभन्दा बढी नियुक्ति तपार्इंले देख्नुुभयो । ती नियुक्तिमा पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा,लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुु-याएका मानिसहरू हुन्,ती योगदान गरेका मानिसहरूलाई उहाँले देख्नुभएन । सबै आफ्नो गुटका मान्छे,आफ्नो प्रशंसक मान्छेहरूलाई भर्ती गर्नुुभयो र सरकारलाई उहाँले आफ्नो गुटको भर्तीकेन्द्र बनाउनुुुभयो । यो उहाँको अर्को दक्षिणपन्थी चिन्तनको अभिव्यक्ति हो ।
उहाँको जुन वैचारिक–राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको अवसरवाद हो । त्यो सङ्गठनमा यस ढङ्गले प्रकट भएर आयो । घोर दक्षिणपन्थी,अराजकतावादी अवसरवाद,यसरी सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा पनि पार्टीव्यापी रूपमा विचलन,अराजकता,शून्यता भयो । एकीकरणपछि हाम्रा तलका कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेन । कहिल्यै पार्टीको प्रशिक्षण भएन । पार्टीले यो काम गर्नुप-यो भनेर कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिने काम भएन । त्यो नदिएपछि स्वाभाविक रूपमा तलको पङ्क्ति अन्योलमा बस्यो । झन्डै तीन वर्षसम्म एकता पनि हुन सकेन । अर्को,भित्रभित्रै उहाँले पार्टीलाई थाहा पत्तै नदिई विभिन्न गुप्त सम्झौता गर्नुभएको रहेछ ।
सांस्कृतिकरुपमा पनि प्रश्नहरु उठेका हुन् ? जस्तै– रामको मूर्ति बनाउने कुरा.....
हामीले जुन समूहको नेतृत्व गरिरहेका छौँ त्यो समूहमा म ७२ वर्ष पुगेको नेता हुँ । हाम्रो आयु त सीमित नै हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा लामो यात्रामा जानु नै पर्नेछ । यो यात्रामा कसरी जाने ?म बाटो देखाउन सक्छु,मलाई विश्वास छ । तर,पनि मेचीदेखि महाकाली,हिमालदेखि पहाड दौडनुपर्छ नेताहरूले । यो दौडने काममा मेरो विचारमा ७० वर्ष उमेर पुगेका मान्छेले चाहाना हुँदाहुँदै पनि धैरै भ्याउन सक्दैन । उनीहरूको सैद्धान्तिक र वैचारिक क्षमता पनि हुनसक्छ । तर,सङ्गठनात्मक हिसाबले काम गर्न त्यो उमेरका मान्छेलाई निकै कठिन हुन्छ । त्यसो हुनाले उहाँहरूले बुद्धि पुर्‍याएर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ, दुवै समूहका युवाले चाहे भने एमालेभित्रको एकता जोगाउन सक्छन् भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?
त्यस्तो नयाँ नेतृत्वले नलिई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । यो नारा मैले नवौँ महाधिवेशनमा अगाडि सारेको हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन करिब ७० वर्ष पुग्दैछ । आउने ३० वर्षमा के काम गर्छन् त कम्युनिस्टहरूले ?त्यो कामका लागि हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने गरी जानुपर्छ । समाजवादबिना त्यो बन्न सक्दैन । समाजवाद ल्यायौँ भने मात्रै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुन्छ । समाजवादले मात्रै नेपाली समाजलाई बचाउन सक्छ । समाजवादले मात्रै हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई,राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन सक्छ । समाजलाई अग्रगतितर्फ समृद्ध,एकताबद्ध समाजका रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्छ । त्यो भरपूर सम्भावना छन् । यसमा हामी आशावादी हुनुपर्छ ।